Ilaalinta meeraheena si qof walbo u noolaan karo waxay u baahan tahay in loo badalo sida aan u soo saarno una isticmaalno koronto. Hay'adda McKnight Foundation waxay taageertaa ficil geesinimo leh oo ku saabsan dhibaatada cimilada, iyadoo la aqoonsan yahay baahida degdegga ah ee loo qabo in la yareeyo wasakheynta kaarboonka, marka loo eego, sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan ee Midwest. Iyada oo loo marayo barnaamijkeeda Cimilada & Tamarta ee Midwest, McKnight wuxuu taageeraa siyaasadaha tamarta nadiifka ah, isbeddelada sharciyeynta, iyo suuqyada iyo isbeddelada teknolojiyada ee horay u marin doona ilaha tamarta aan kaarboon lahayn, si si weyn loo yareeyo wasakheynta kaarboonka ee Badhtamaha Galbeed 2030.
Wareejinta labaad ee McKnight ee deeq-bixinta 2021, guddiga ayaa siiyay 111 deeqo oo wadartoodu tahay $20.7 milyan. Lacagtaas, $6.5 milyan ayaa loo aaday si loo caawiyo deeq bixiyeyaasha Barnaamijka Cilmi-baarista iyo Cimilada ee Midwest, iyadoo diirada la saarayo xoojinta kaqeybgalka dimuqraadiyadda, wax ka badalka nidaamka tamarta, iyo korantada gaadiidka iyo dhismayaasha.
"Barnaamijka Midwest Cimilada & Tamarta wuxuu ilaaliyaa oo hagaajiyaa tayada nolosha Midwest iyada oo loo marayo maalgashi joogto ah oo xagga cimilada iyo hoggaanka tamarta ah ee gobolkan," ayuu yiri guddoomiyaha guddiga McKnight Noa Staryk. "Xilligan muhiimka ah ee taariikhda aadanaha, waxaan ku faraxsanahay inaan ka taageerno la-hawlgalayaashayada horumarinta himilooyinka himilooyinka hami leh."
Iyada oo loo marayo deeqo, maalgashi, isu imaatin, iyo ka qeyb qaadashada bulshada, barnaamijka Cimilada wuxuu taageeraa dadaallada lagu dhisayo awoodda iskaashi. "Hay'adda McKnight Foundation, oo ay iskaashanayaan kuwa kale, waxay leedahay door awood leh oo ay ku ciyaareyso wax ka beddelka nidaamkeenna tamarta," ayay tiri Tonya Allen, oo ah madaxweynaha Mu'asasada. Wadajir ahaan, waxaan u yareyn karnaa wasakheynta kaarboonka, heer ahaan, si cadaalad ah u abuurta malaayiin shaqo iyo balaayiin doolar maalgashiyo cusub.
“Machadka McKnight Foundation, oo ay iskaashanayaan kuwa kale, wuxuu leeyahay kaalin awood leh oo uu ku leeyahay beddelka nidaamka tamarta. Wadajir ahaan, waxaan u yareyn karnaa wasakheynta kaarboonka, marka loo eego, si cadaalad ah u abuurta malaayiin shaqo iyo balaayiin doolar maalgashi cusub. ”
—TONYA ALLEN, MADAXWEYNE McKNIGHT
Kaqeybgalinta Bulshooyinka Suuqaynta
McKnight wuxuu siiyay $1.46 milyan in ka badan 24 bilood Machadka Weyn ee Weyn ee Horumarka Joogtaysan ee guud ahaan taageerada hawlgalka. Iyada oo ku saleysan Minneapolis, Machadku wuxuu ujeedkiisu yahay inuu ku guuleysto dhaqaale kaarbooni ah oo loo maro shan barnaamij oo kala ah: maareynta kaarboon, bulshooyinka, korantada, tamarta dib loo cusboonaysiin karo, iyo gaadiidka iyo shidaalka.
Machadka Great Plains Institute wuxuu ka mid ahaa qabanqaabiyeyaashii gacan ka geystey diyaarinta qorshe u diyaargarow sannadka 2020 ee cimilada iyo tamar nadiif ah iyadoo la filaayo gargaarka Covid-19. Ururku wuxuu keenaa khibrad siyaasadeed oo muhiim ah nidaamka korontada, gawaarida korantada iyo shidaalka nadiifka ah, kaarboon ka saarista, iyo horumarka bulshada ee waara. GPI waa aamin bixiye dhexdhexaadiya goballada Midwest.
Arrinta gaashaandhigga ee mustaqbalka gaaska dabiiciga ah (oo sidoo kale loo yaqaan 'fosil gas') ee nidaamkayaga tamarta, GPI wuxuu hoggaamiyaa geeddi-socodka daneeyayaasha oo isu keenay warshadaha, ururrada deegaanka, dowladda, iyo kuwa kale si loo sii wado wadahadalka ku saabsan decarbonization. Nidaamkani wuxuu doonayaa inuu ka dhigo Minnesota qaab qaran oo dib loogu noqdo koritaanka isticmaalka gaaska foosha.
McKnight wuxuu siiyay $500,000 muddo 24 bilood ah Xarunta Minnesota ee U-doodista Deegaanka (MCEA), oo ah u-doodaha sharciga deegaanka ee gobolka oo ku yaal St. Paul. MCEA waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka u ololeeya u doodista, keenista khibrad muhiim ah si loo baro siyaasad dejiyeyaasha isla markaana loo taageero dadaalada bulshada si loo ilaaliyo bey'adahooda, gaar ahaan meelaha ay dadku sida xun ugu saameeyeen wasakheynta iyo sinaan la'aanta bulshada.
Deeqdani waxay taageertaa Barnaamijka Cimilada ee MCEA, oo ay ka mid tahay xaqiijinta hawlgabka ka hor 2030 ee dhirta dhuxusha ku hartay ee Minnesota, ka hortagga maalgashiga dhirta cusub ee shidaalka, iyo dhiirrigelinta maalgashiga waaxda tamarta la cusboonaysiin karo.
McKnight wuxuu siiyay $600,000 muddo 24 bilood ah Hay'adda Sierra Club Foundation, oo ah maalgeliyaha miisaaniyadda ee Nadaafadda Tamarta ee loogu talagalay All Midwest, barnaamij ka socda Sierra Club iyo Sierra Club North Star Chapter. Nadiifinta Tamarta ee Dhammaan waxay mideeysaa u-doodayaasha aasaaska u ah inay dalka uga gudubto dhuxusha iyadoo la horumarinayo howlgabnimada dhirta dhuxusha jirta iyo ka-saarista shidaalka haraaga ah dhaqaalaha intiisa kale.
Shaqada Hay'adda Sierra Club Foundation waxay ka gudbeysaa dhuxusha si ay u beddesho koritaanka gaaska foosha: kala-goynta waaxda dhismaha iyada oo loo marayo dib-u-habeyn lagu joojinayo kaalmada gaaska, nidaaminta qalabka gaaska, dhiirrigelinta qalabka korontada ee eber-ka-baxa, iyo sameynta barnaamijyo koronto-yar. Deeqdani waxay sii wadi doontaa taageerada awooddeeda abaabul ee goobaha istiraatiijiga ah ee gobolka oo dhan, oo ay ku jiraan Rochester iyo Duluth - oo lagu taageerayo u-wareejinta qaybta tamarta ee nadiifinta tamarta iyo ka saarista shidaalka lafaha qaybaha kale ee dhaqaalaha.